हिउँ परेको रात - दैनिक
आज फेरी त्यसै गरी हिउँ झरिरहेछ, मलाई यो हिउँ झरेको मौसमले त्यो दिनको सम्झना गराईदियो जुन दिन म हस्पिटलबाट घर फर्कदै थिएँ । त्यसदिन मेरो इभिनिङ सिफ्ट थियो बेलुकी ९ बजे ड्युटी सकियो । मौसम अनौठो थियो । काठमाडौं हिउँ पर्ने ठाउँ होइन । त्यसदिन हिउँ परिरहेहको थियो । सडकमा गाडीहरु फाटफुट मात्र चलेका थिए । पैदलयात्रीहरु त एकैजना पनि देखिदैन थिए । सडकभरी छरपष्ट छरिएर बस्ने कुकुरहरु कुनाकाप्चा तिर छिरिसकेका थिए । मैले माक्स लगाए, रुमाल बाँधे अनि हेलमेट लगाए । म जतिसक्दो न्यानो हुने कोशिस गर्दै थिएँ । स्कुटर लिएर सडकमा निस्किए । बाहिर सोचे भन्दा बढी नै चिसो रहेछ । सडकका छेउछाउ र खाल्टाहरुमा हिउँका केही थुप्राहरु देखिन्थे । जाडो अत्याधिक थियो । सायद माइनस तिरै गएको होला टेम्पेचर । म विस्तारै घरतिर हुइकिदै थिएँ । गौशला चोक कटेर अगाडि बढ्दै गर्दा भर्खर जन्मिएको बच्चा रोएको आवाज सुने लाग्यो यस्तो जाडोमा यति राति यो सडकमा कसले निकाल्छ भर्खर जन्मिएको बच्चा ? म अगाडि बढे बच्चाको आवाज झन चर्कियो मैले आफ्नो स्कुटी साइड लगाएर रोके । झर्न मन थिएन यसो सडक किनार तिर हेरे कोही केही थिएन । अगाडि बढ्न खोज्दा फेरी बच्चा रोयो यसो हेरे प्रतिक्षालयबाट आवाज आइरहेको थियो । हेँरे कोही थिएन । हिउँले पूरै भिजिसकेको थिएँ । जाडोले सबै अङ्ग लाटो भइसकेका थिए । स्कुटीबाट झर्ने मनै थिएन घर जाम कि झरेर हेरौ भएर एकछिन अल्मलिएँ । नारीमन साँच्चै कोमल हुन्छ । मेरो मन मानेन झरे प्रतिक्षालयतिर गएँ केही देखिन बच्चा पनि रोएन । अब भने मलाई डर लाग्यो सुनसुन रात, यो अनौठो मौसम, बच्चा रोएको आवाज, साच्चै भूत प्रेत त हुन्न ? छाती ढक्क फुलियो धड्कन तेज भयो । जाडोले भन्दा डरले कमाउन थाल्यो । हतार हतार फर्किन लागेको थिएँ प्रतिक्षालयको पछाडिबाट फेरी आवाज आयो । डराउँदै हेरें । अँधेरो थियो । मोबाइल निकाले हात पूरै कापिरहेका थिए जाडो र डरले । बल्ल बल्ल मोबाइलको लाइट बाले । एउटा भर्खर जन्मिएको बालक एउटा पातलो फरियामा एउटा काटुन माथी पल्टिरहेको थियो, छेउमा एउटी २३÷२४ वर्ष जतिकी केटी पूरै शरीर फालेर लम्पसार थिई लाग्यो बिचरी मरिछे । पञ्जा खेलेर घाटीमा हात राखेर पल्स भेटे ए जिउँदै रैछे, तर यति तातो थिई ज्वरो त १०४ नै पुगेछ कि के हो ? हत्तपत्त हस्पिटलमा फोन गरे अनि एम्बुलेन्स मगाए । एम्बुलेन्स आयो । त्यो बहिनीलाई एम्बुलेन्समा हालियो । मैले बच्चा उठाए बच्चा बोक्न त एकजना चाहिन्छ अब के गर्ने ? मैले स्कुटर त्यही छाडे अनि हस्पिटल लाग्यौ । आमा छोरा दुवैलाई आईसियूमा राखियो । औषधी चढाइयो त्यसपछि म फेरी हस्पिटलको भ्यानमा गौशलासम्म गए अनि स्कुटर लिएर घर गए तातो पानीले नुहाए सबै लुगा भिजाए अनि तातो कफि बनाए । राती ब्राह बजिसकेको थियो । मन अशान्त भइरहेको थियो कफि खादैँ यता उता टोलाउँदै थिए । बाहिर अझै हिउँ झरिरहेको थियो । सडकको पोलमा बलेको बत्तिमा फूर फूर झरेको हिउ देखिन्थे । कफि सकियो मनको अशान्ती कायमै थियो । निन्द्रा परेन । मनमा कैयौ प्रश्नहरू आइरहे
को होलिन् ?
किन त्यसरी सडकमा थिइ ?
ठिक होला कि नहोला ?
अहिले कस्तो होला ?
श्रीमान् कहाँ होला ?
रातको १ बज्यो मन शान्त भएन । बाहिर हेरे हिउ पर्न छाडेको थियो । न्यानो लुगा लगाए अनि गाडी लिएर निस्किए फेरी हस्पिटल गए ।
बच्चा ठिकै छ आमालाई ठिक पार्न सकिन्न होला डक्टरले भन्नुभयो ।
म झस्किए ला अब के गर्ने त ?
हेरौ हामीले सकेको गर्ने हो ।
म बिरामीको छेउमा बसेको थिए निदाएछु । मेरो हात कसैले समाते जस्तो लाग्यो हेरेको बिरामीलाई होस् आएछ । घडिमा बिहानको चार बज्न लागेको रहेछ । डाक्टरलाई बोलाए चेक गर्नु भयो ।
सबै ठिक छ अब राम्रो हुन्छ आत्तिनु पर्दैन । होस नआउदा डर थियो अब नआत्तिनु । तिमी घर गए हुन्छ ।
मलाई घर जान मन थिएन फेरी बिरामी भएकै ठाउँ गए । बोल्न खोज्दै थिइन । मैले बोल्न दिइन तपाई अहिले केही नबोल्नुस् । आराम गर्नुस् सबै ठिक हुन्छ । तपाईको छोरा पनि ठिक छ ।
मेरो डे सिफ्ट थियो । घरमा आएँ अनि सुते बयूझिँदा १२ बजिसकेको रहेछ । १२ बजे हस्पिटल पुग्नुपर्ने । हतार हतार साबित्री सिस्टरलाई फोन गरेँ । आधा घण्टामा आइपुग्छु भने । फ्रेस भएँ । एक कप कफि खाएँ अनि निस्कएँ ।
आजको मौसम र हिजको मौसम पूरै शताब्दीकै फरक जस्तो थियो खुल्ला आकाश, चकिलो घाम, सफा मौसम ।
म हुईकिदै हस्पिटल पुगे । मेरो ड्युटी मेडिकल वार्डमा थियो । मैले हिज ल्याएकी बहिनी आईसियू मै थिइन । हालखबर सोधे राम्रो छ भन्ने पाएँ । ढिला आएकाले भेट्न जान पाइन । साबित्री सिस्टरले सबै बिरामीको डिटेल दिनुभयो । काममा व्यस्त भइयो । तीन बजेतिर समय निकालेर आमा छोरा दुबै भएको ठाउँमा गएर आएँ । दुवै ठिक रहेछन् । बेलुकी आउँछु भनेर निस्किए । छोरा ठिक थियो । आमा अलि कमजोर थिइन अरु सबै नर्मल थियो ।
बेलुकी ड्युटी पछि माथि गए । छोरालाई लिएर आमा भएको ठाउँमा गएँ । मलाई देख्ने बित्तिकै भक्कानिएर रुन लागिन । दिउँसो सिस्टरले भनिदिनु भएछ उनलाई कसरी, कसले, कुन अवस्थामा हस्पिटलमा ल्यायो भनेर । उनलाई सम्झाएँ । शान्त पारे । उनीमा निकै सुधार आयो । आइसियूबाट वार्डमा सिफ्ट गरियो ।
एकदिन मैले उनको बारेमा सोधे ।
मलाई जान्नु थियो । फुटपाथमा किन बच्चाको जन्म भयो । यतिका दिनसम्म किन पतिले खोजी गरेन । सूचना प्रकाशितसम्म गरियो तर कोही किन आएन ?
उनी बरबरी रुन थालिन । स्याङ्जा हो मेरो घर, नाम शुसिला । म १० कक्षामा पढ्दै थिएँ । एकदिन हाम्रो स्कुलमा एकजना विदेशी र एकजना नेपाली आए । विदेशीले हाम्रो स्कुलमा पुस्तकालय निर्माण गरिदिने भनेर आएका रहेछन् । एकमहिना गाउँमै बसेर पुस्तकालय बनाएर सक्ने अनि मात्र जाने भन्यो । मेरो बुबा स्कुलको हेडसर हुनुहुन्थ्यो । पाहुनालाई हाम्रै घरमा राख्ने भइयो । विदेशीको नाम जोन थियो । नेपाली विकास । थर थाहा छैन । घर नुवाकोट हो भन्थ्यो । हरेक दिनको सँगसँगैको उठबसले विकास र म बीचमा धेरै सामिप्यता बढ्न थालेको थियो । मैले उसलाई प्रेम गर्न थालेकी थिएँ ।
स्कुलमा पुस्तकालय बन्यो । उनीहरु फर्कने भए । मलाई नरमाइलो लागि रहेको थियो । जाने बेलामा विकासले एउटा नम्बर दियो र भन्यो कहिले काहीँ फोन गर्नु ।
मैले बाबाको मोबाइलबाट लुकी लुकी फोन गर्थे । एक दिन बाबाले थाहा पाउनु भएछ । गाली गर्नु भयो । त्यसपछि धेरै दिनसम्म उसँग सम्पर्क गरिन । पछि फेरी फोन गर्न थाले । बाबाले बेला बेलामा सम्झाउनु हुन्थ्यो पढाइ भनेको आँखा हो । पढाइ बिनाको मान्छे अन्धो जस्तै हुन्छ । राम्रोसँग पढ आदि आदि ।
मलाई यि सब कुराको प्रवाह थिएन । मलाई त केवल विकास चाहिएको थियो । एकदिन विकासले काठमाडौं आउ भन्यो । म राजी भएँ । बुबाले थाहा पाउनु भयो । सम्झाउनु भयो चिन्नु न जान्नुको मान्छेको पछि लागेर गएर दुःख पाउलास । म मानिन, गाली गर्नु भयो, पिट्नु भयो । अहँ मैले मेरो हठ छाडिन । ममा प्रेमको भूत चढेको थियो । म जाने नै भएँ । अन्तत केही नलागेर बाबाले जा मर फेरी फर्केर आउनु पर्दैन । तेरोलागि अब हामी म¥यौ । हाम्रो लागि तँ मरिस ।
म काठमाडौं आएँ ।
विकास बसपार्कमा लिन आयो । कोठामा लग्यो । कोठामा एउटा पलङ र एउटा किचन ¥याक मात्र थियो । हामीसँगै बस्न थाल्यौ । मैले विवाहको कुरा गर्दा यसै टाथ्र्यो । मलाई के थाहा उसको सोच विहे गर्ने नभएर उसको स्वार्थ पूरा गर्ने मात्र थियो भन्ने । मेरो पेटमा बच्चा बसेको थियो । मैले एकदिन खुसीहुँदै उसलाई सुनाएँ । उसले मेरो गालामा जोडले थपड हान्यो । सोचे अफिसमा केही टेन्सन थियो होला । समय बित्दै गयो उसले जहिले रुखो व्यवहार गर्न थाल्यो । कहिले काही कोठामा नै आउँदैनथ्यो । एकदिन आयो एक महिनाको टुर छ भनेर निस्क्यो ।
पेटमा बच्चा बढिरहेको थियो । काठमाडौं मेरा लागि भुलभुलैया भन्दा कम थिएन । कहाँ के केही थाहा थिएन । घरबाट आउने बेला ल्याएको केही पैसा थियो । कोठाभन्दा अलि पर एउटा पसल थियो त्यहीबाट केही ल्याउथे । कहिले खान्थे कहिले खान मन लाग्दैनथ्यो यसै सुत्थे । महिना दिन बित्यो विकास आएन । फोन अफ थियो । मलाई कोठाबाट बाहिर निस्कनै मन लाग्न छोड्यो । यसैपनि म बाहिर निस्किदैन थेँ । कोठामा खाने कुराहरु सबै सकिए । आफूसँग भएको पैसा पनि सकिए । घर परिवार बाबाआमा सबै सबै सम्झिएँ । आफैलाई धिक्कारे ।
सुनेथेँ पशुपतीमा खानेकुरा बाँड्छन भन्ने । एकदिन सोध्दै सोध्दै पशुपति गए । एउटा छेउमा बसे चामल र केही पैसा पाएँ । त्यही चामल खाएँ । गुजारा गरे । कोठामा गइन सडकमै सुते । त्यसदिन बेलुकी बेस्सरी पेट दुख्यो । के गर्ने के गर्ने भयो, छटपटाए । साँझ प¥यो अँध्यारो भयो पेट दुख्न झन बढ्न थाल्यो । हिउँ परेर चिसो भएको थियो । खपिनसक्नु जाडो थियो । एकातिर पेट दुखिरहेको थियो । विस्तारै विस्तारै सडक तिर निस्कने कोशिस गरे । बल्ल बल्ल त्यो प्रतिक्षालयमा आइपुगे । त्यसपछि प्रतिक्षालयको पछाडि आड लागेर बसे, पल्टिए । पीडामा रोएँ चिच्याएँ बच्चा जन्मियो । त्यसपछि के भयो थाहा छैन आँखा खोल्दा यहाँ हस्पिटलमा रहेछु ।
आफ्नो बुबाको कुरा नमानेर जिद्दी गरेर घर छाडे आज यो स्थितिमा आइ पुगे । भोलि बच्चाले आफ्नो बाबुको बारेमा सोध्यो भनेनी के भन्ने मलाई त उसको सही नाम पनि थाहा छैन । घर थाह छैन बुबाको कुरा नमान्नले आज यस्तो मर्नुन बाँच्नुको स्थितिमा आइपुगे ।
शुसिला आफ्नो आँसु पुछी ।
संसारमा तपाई जस्तो कल्याणकारी मान्छे पनि हुँदा रैछन् । तपाईले गर्दा आज मेरो छोरा र मेरो जीवन सुरक्षित छ नत्र त्यसदिन हामी दुबै मरिसकेका हुने थियौ होला ।
मलाई शुसिलाको त्यो केटाकेटीपनले बुबाको कुरा लत्याएर एउटा अञ्जान मान्छेको पछि लागेर घर छाडेको कुराले रिस उठिरहेको थियो । फेरी त्यो छटपटी र प्रसव पीडा सम्झिएरै पनि माया लागिरहेको थियो । उनलाई के भन्ने केही आएन दिमागमा । विस्तारै उठे उनको टाउकोमा हातले थपथपाए अनि त्यहाँबाट निस्किए ।
समय धेरै अगाडि बढिसक्यो । त्यसदिन जन्मेको त्यो बच्चा आज प्लस टु मा भर्ना भइसक्यो । हामी बुढी भै सक्यौ तर मेरो दैनिकी अझै फेरिएको छैन आजपनि म त्यसैगरी हस्टिलमा काम गरिरहेकी छु ।
आज फेरी त्यही दिनको जस्तो मौसम दोहोरिएको छ । के संकेत गर्दै छ यो मौसमले ? कि अर्की शुसिला परी फेरी त्यस्तै विकासको जालमा ?
२०७२ माघ १४